EPRDF Archives - OMN
Oduu Hagayya 30, 2017
Oromia Media Aug 31, 2017
OMN: Amharic Program Aug 27, 2016
Oromia Media Aug 27, 2016
Dambi Doollootti mormiin ciminaan gaggeeffamaa jira.
OMN:Oduu Adol.15,2016 Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambi Doollotti xumura qormaata biyyaalessaa kutaa kudha 12ffaa booda barattoonni mormii isaanii yoo geggeessaa turanitti, poolisoonni Federaalaa hidhaa fi reebichaan barattoota…
Adaabbaatti Hajii Guyyee Duulaa reebicha isaan irra gaheen wareegaman.
OMN:Oduu 13,2016 Godina Arsii lixaa magaalaa Adaabbatti mormii ji’oota jaha dura geggeeffamee ture irratti, manguddoon Oromoo Haaji Guyyee Duulaa reebicha loltoonni Agaazii isaanirratti raawwataniin miidhamanii lubbuun darbuun himame.…
Gondoriitti poolisoota Fedaralaa 11 ajjeefaman keessaa 3 Oromoo ta’uun beekame.
OMN:Oduu Adol.13,2016 Lakkoofsi poolisoota federaalaa Gondarii fi naannawa sanitti ajjeefamanii 11 gahee jiraachuun isaanii himame. Poolisota iddoo kanatti ajjeeffaman keessaa sadii dhalootaan ilmaan Oromoo tahuunis beekame jira.…
Jibuutiitti Baqatoonni Oromoo qabamanii dirqiin gara biyyaatti deebifamaa jiru.
OMN:Oduu Adol. 13,2016 Namoota biyyatti deebifamuuf qabaman kana keessaa, namoonni lubbuun darbanis jiraachuu baqqattoonni dubbatan. Nami biyyaa Jibuuti baqattummaan jiraatu obboo Hordofaa Gaaddisaa akka jedhuttii mootummaan Jibuuti…
Mi’eessootti namoonni lama loltoota Agaaziitiin ajjeefaman.
Oromia Media Jul 8, 2016
OMN:Oduu Adol.08,2016 Godina Harargee lixaa magaalaa Mi’eessotti mormii geggeeffamaa jiruun lubbuun namoota lamaa loltoota Agaaziitiin darbuun himame. Magaalattiin wayta ammaa loltoota raayyaa ittisa biyyaa jala galtee akka jirtu…
Mormii Jabaa Giinciitti gaggeeffameen barataan tokko ajjeefame.
OMN:Oduu Adol.08,2016 Magaalaa Gincitti bifa haaraan mormii dhoheen, poolisoota Federaalaatiin barataa Asheetuu Worquu yoo ajjeefamu, barataa yuniversiitii Arbaa Minci kan ta’e ammoo barataa Irranaa Fayyeeraa rasaasaan rukutamee madaayee…
Harmeen Obbo Dajanee Xaafaa akka Ilma isaanii hingaafanne dhorkaman.
Oromia Media Jul 5, 2016
OMN:Oduu Adol.05,2016 Waraqaa Eenyummaa Sooramaan Mana Adabaa Seenanii Ilama Isaanii dubbisuu kan dhorkaman nama Umuriin ganna 85 Haati Obbo Dajanee Xaafaa Abbaan Murtii akka Isaan Waraqaa Eenyummaa qabaniin seenanii dubbisaniif ajaja…
Magaalaa Ambootti Polisoonni Fedaaraalaa wal ajjeesan.
OMN:Oduu Adol.05,2016 Wal-dhabdee humnoota waraanaa mootummaa Itoophiyaa Yuuniversiitii Amboo kaampaasii Awaaroo giddutti mudateen namoonni lama ajjeefamuu fi dubartiin tokko gar-malee midhamuun himame. Rakkoon wal-dhabde kuni dhimmaa…
Dhukkubni Koleeraa Finfinnee keessatti babal’ataa jira.
Oromia Media Jul 4, 2016
OMN:Oduu Adol. 04,2016 Finfinnee Keessatti dhukkubi Koleeraa akkaan baballataa Jiraachuu dhaabbati Fayyaa addunyaa ibse. Akka Ibsa kanaatti guyyaa nama dhukkuba kanaan qabame 133 tu gara buufata Fayyaa dhaqaa jiraa jedha. Biyya…
Qeellam Wallaggaa Mugiitti mormii geggeeffameen barataan tokko garamalee midhamee jira.
OMN:Oduu Adol.04,2016 Godina Qeellem Wallaggaa aanaa Anifilloo magaalaa Mugitti guyyaa hardhaa mormiin geggeeffamaa oolee jira. Poolisoonni Oromiyaa fi korri bittinneessaa reebicha geggeessaniin barataan tokko gar-malee kan miidhame yoo…
Qonnaan bultoota Aanaa Fadisi jalaa Raammoon Geerii Oyiruu isaanii mancaasaa jira.
Oromia Media Jul 3, 2016
OMN:Oduu Adol.03,2016 Godina Harargee bahaa Aanaa Fadiis Araddaa Guduraatti raammoon Geerii Oyiruu qonnaan bultootaa mancaasaa jira.Mootummaan raammoo kana ittisuudhaf deeggarsi taasiseef hinjiru. Inumaayyuu qonnaan bultoota Oyiruun…
OMN: Oduu Waxabajjii 329.2016
Oromia Media Jun 30, 2016